किन्ने होइन त अब सुन ? नयाँ वर्षमा ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? हेर्नुहोस् …::Nepal's Online News Portal
काठमाडौं । आज आईतबार सुनको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
यसअघि छापावाल सुन ६० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य पनि ओरालो लागेको छ।
आज तेजावी सुन ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
यसअघि तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज सुनको भाउ बढेसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ।
आज चाँदी प्रतितोला ७२० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। यसअघि चाँदी ७३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
काठमाडौं,२९ चैत । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ६० हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मूल्य आज छ सय रुपियाँले...